Amabhodlela amanzi amahle kakhulu ezinja: isilwane sakho sihlala sinamanzi | Izinja Umhlaba
Uma uyohambahamba, noma ugijima, uvame ukuphatha ibhodlela lamanzi okufanele uzithobe ngalo ukuze umzimba wakho ungahlushwa ukuzivocavoca umzimba okwenzayo. Endabeni yezinja kuyadingeka, kepha, Yimaphi amabhodlela ezinja angcono kakhulu?
Ngezansi sikunikeza izibonelo zamabhodlela ezinja kanye nomhlahlandlela lapho ungafunda khona kabanzi ngalesi sesekeli ukhohliwe futhi, noma kunjalo, kubaluleke kakhulu esilwaneni sakho nakuma-hydration aso.
1 Amabhodlela amanzi amahle kakhulu ezinja
2 Ungayikhetha kanjani ibhodlela lamanzi lezinja
3 Kungani kubalulekile ukuletha ibhodlela lamanzi ezinjeni ngesikhathi sokuhamba
4 Kunini lapho kufanele sinike inja yethu amanzi?
5 Isebenza kanjani indoda ephuza izinja ephathekayo
6 Kuphoqelekile yini ukuphatha ibhodlela ngamanzi ukuhlanza umchamo wenja emgwaqweni?
7 Ungathenga kuphi izinja ibhodlela lamanzi
Amabhodlela amanzi amahle kakhulu ezinja
Nayi inketho yamabhodlela ethu awathandayo ezinja:
Amabhodlela Womlilo we ...
Ibhodlela lamanzi le-Toozey ...
I-BePetMia Bottle Yamanzi ...
Ungayikhetha kanjani ibhodlela lamanzi lezinja
Lapho uthenga izinja ibhodlela lamanzi, kufanele ucabangele izici eziningana ukuze ulunge. Okubaluleke kakhulu nalapho sincoma ukuthi unake, yilokhu okulandelayo:
Amandla: Amandla kungenye yezinkinobho. Akufanele ucabangele kuphela ubukhulu benja yakho nesikhathi sokuhamba noma ukuzivocavoca umzimba ozokwenza, kodwa futhi nokunye ongakusebenzisa. Isibonelo, ingasetshenziswa ukuphuza amanzi, ukuhlanza umchamo wezinja, ukukholisa indlela yokuziphatha engafanele (ukukhonkotha, ukuzama ukuhlasela, njll.).
Material: Izinto ezijwayelekile zamabhodlela amanzi ezinja imvamisa i-PVC, ipulasitiki eqinile futhi engazweli okuzohlala isikhathi eside. Inkinga ukuthi, ngokuhamba kwesikhathi, ingaba nephunga. Enye inketho yi- insimbi engagqwali noma insimbi, okuvame ukuhlanzeka ngokwengeziwe futhi kube lula ukuyihlanza futhi kubulale amagciwane.
Ngomuntu ophuzela owakhelwe ngaphakathi: Amanye amabhodlela amanzi ezinja anezinhlelo zokuphuza ezakhelwe ngaphakathi, ngokwesibonelo lawo anazo umumo wesipuni noma onesiqukathi esisizayo sokugcwalisa ngamanzi.
Kungani kubalulekile ukuletha ibhodlela lamanzi ezinjeni ngesikhathi sokuhamba
Uma uyohambahamba, noma uzivocavoca ngaphandle, thatha ibhodlela lamanzi ukuze unisele. Vele kunezinzuzo eziningi eziningi, njengokugwema ukubonakala kwesifo esesabekayo, noma ukwenza ngcono ukumelana komzimba.
Endabeni yezinja, kwenzeka into efanayo. Futhi bayazikhandla ngokomzimba lapho behamba noma begijima, futhi Abasakwazi ukulinda ukufika ekhaya baphuze Ikakhulukazi ngoba ungadala inkinga enkulu (lapho izinja ziphuza ngokushesha zingaba negesi, izinkinga zokuminyaniswa noma ukusonteka kwesisu, into ebucayi kakhulu engenzeka).
Ngaphezu kwalokho, lelo bhodlela lamanzi lingaphinde libe nokunye, njengokunciphisa isilwane sakho uma siqala ukukhonkotha noma sifuna ukubhekana nenye inja (noma siyivikele kulokho ngokuthela amanzi kuso); noma ukuhlanza umchamo wenja emgwaqweni.
Kunini lapho kufanele sinike inja yethu amanzi?
Inja izodinga amanzi lapho yomile. Futhi lokho kwenzeka lapho isilwane sivivinya umzimba, uma kushisa kakhulu, uma sinomkhuhlane ... Ngisho noma kungowesifazane, ekunceliseni, ekukhulelweni noma ekushiseni kungaba nesidingo esikhulu samanzi kunezinye izikhathi.
Kepha, ugxile ekuhambeni nasezenzweni zemidlalo, kufanele mnikeze isiphuzo ngaphambi kokuqala (inani elincane futhi uhlale ulinda isikhashana ngaphambi kokuqala ukuhamba noma ukuzivocavoca umzimba ukuze ungazizwa kabi), lapho uphumula (hhayi ngokushesha, kodwa ngemuva kwesikhathi lapho uhlala khona); nalapho ubuyela ekhaya (futhi lokho akusheshi).
Kubalulekile ukuthi ukhumbule lokho inja akufanele iphuze ngokushesha ngemuva kokuzivocavoca Njengoba, isifiso sokuphuza, singadala ukuthi uhlanze noma kwenzeke okubi kakhulu.
Isebenza kanjani indoda ephuza izinja ephathekayo
Wake wambona ophuza izinja ophathekayo? Lezi zivame ukwenziwa ngezindlela ezimbili ezihlukile. Ngakolunye uhlangothi, njengesiqukathi esisizayo ongagcwalisa amanzi ukuze isilwane sikwazi ukuphuza noma yini esiyifunayo. Lokhu futhi kukuvumela ukuthi ungeze okuthile ongakudla uma uzoba kude nasekhaya isikhathi eside.
Ngakolunye uhlangothi, unawo namabhodlela ezinja ezinomklamo ofana nodladla, okungukuthi, zi-concave ukuze, ngokucindezela inkinobho, amanzi aqoqane kuzo ukuze isilwane siphuze kalula.
Ngokuya ngosayizi wenja, kunconywa uhlobo oluthile noma olunye. Isibonelo, uma incane noma iphakathi nendawo, amabhodlela anesipuni anele ngoba amanzi agciniwe anele. Kepha uma ufuna ukuthi ihlanze umchamo, iphuze noma ilungise isimilo, khona-ke enkulu enkulu enesiqukathi sayo esisizayo ingcono.
Kuphoqelekile yini ukuphatha ibhodlela ngamanzi ukuhlanza umchamo wenja emgwaqweni?
Kusukela ngo-2019 omasipala abaningi, ngomzamo wokwenza ngcono ubuhle (nokunuka) kwemigwaqo, isungule imfuneko eyisibopho yabanikazi bezinja okwakungahlanganisi nje kuphela ukuhlanza indle yezilwane, kodwa futhi nokwenza okufanayo ngokuchama. Ngamanye amagama, kufanele ulethe okuthile ukuhlanza umchamo wenja yakho.
Inkinga ukuthi akubona bonke omasipala abayidingayo. Abanye bakwenza, ngezinhlawulo ezingafika kuma-euro angama-750 uma bekubamba ungakuhlanzanga; kanti abanye abakwenzi lokho. Isibonelo, kuphoqelekile ukuhlanza umchamo ngamanzi (noma ingxube yamanzi neviniga esebenza kahle) e-Albacete, Alcalá de Henares, Alcobendas, Almería, Ceuta, Jaén, Mieres ...
Kuhle ukuhlola ukuthi kuphoqelekile yini noma cha edolobheni lakho, futhi uma kunjalo, phatha njalo ibhodlela lezinja.
Ungathenga kuphi izinja ibhodlela lamanzi
Manje njengoba wazi okuningi ngokusebenza kwebhodlela lamanzi enja, nokuthi kungani kufanele ube neyodwa, into elandelayo okudingeka uyazi ukuthi ungayithenga kuphi. Sikunikeza izinketho? Lapha siphakamisa ezinye izitolo lapho ungazithola khona.
AmazonI-Amazon, ngokungangabazeki, isitolo lapho uzothola khona ukuhlukahluka okuningi, kokubili kumamodeli, ukuhlukahluka, usayizi, njll. Izintengo zayo zehluke kakhulu ngakho-ke zizohambisana nanoma isiphi isabelomali onaso.
kiwiko: Kulokhu sikhuluma ngesitolo esigxile kuzinsiza zezilwane futhi-ke, ungathola amabhodlela afanele izinja kuya ngosayizi nesikhathi sokuhamba osinikeza isilwane sakho.
I-Aliexpress: Enye inketho, efana ne-Amazon, yi-Aliexpress. Kuyo amanani ashibhile kakhulu kunezinye izitolo, kepha isikhathi sokulinda naso side. Noma kunjalo, uma ungajahile kakhulu, ungonga imali uma uyithenga.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ibhodlela lamanzi enja